Al Shabaab oo laga saaray deegaanno ku yaalla Gedo
GARBAHAREY, Soomaaliya - Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa Kooxda Al Shabaab kala wareegay saaka deegaano ku yaalla gobolka Gedo oo hoos taga maamulka Jubbaland.
Korneel Axmed Ibraahim, oo kamid ah Saraakiisha ciidamada Militariga Gedo ayaa Warsidaha Garowe Online u xaqiijiyay in Shabaab ay ka saareen dhowr deegaan oo ku yaalla inta u dhaxaysa degmooyinka Baardheere iyo Garbahaarey.
Axmed ayaa intaasi ku daray in ujeedka Howlgalkooda uu ahaa inay isku fureen wadooyinka ciidamada sahayda u marto ee gobolka Gedo, oo ay ka dhacayeen mudooyinkii damne weeraro Al Shabaab ku qaadaysay goobaha ay dowladda maamusho ee ku dhaw xuduuda Kenya.
"Ma jirin wax iska caabin ah oo ciidamada la kulmeen intii uu socday howlgalkooda, maadaama Al Shabaab isaga baxday deegaanada lala wareegay markii ay maqleen inuu duulaan kusoo wajahan yahay," ayuu yiri Korneel Axmed.
La wareegista deegaanada waxay kusoo beegmayaa xilli ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah Al Shabaab, iyadoo dhawaan la filaya in dowladda ay qaado howlgal military.
Ciidamada huwanta ayaa rajo ka qabo inay Al Shabaab ka saaraan guud ahaan dalka, kahor inta aysan AMISOM ka bixin Soomaaliya, kaasi oo billaabanaya dhamaadka bishan oo 1,000 la qaadayo.
Inkastoo laga saaray deegaanno iyo degmooyin badan, Al Shabaab wali waxay awoodaa inay fuliso weeraro kuwaasi oo u badan qaraxyo ay ka gaysato magaalada Muqdisho, oo ah xarunta dowladda Federaalka Soomaaliya.
Howlgallada ayaa ahaa kuwa ay ka qeyb-qaateen Diyaarado dagaal oo gantaallo ku garaacay...
Somalia: Nabadoono lagu dilay Ceel-Waaq iyo Afgooye
Soomaliya 02.09.2017. 14:00
Kenya oo dib u billowday dhismaha darbiga Xadka Soomaaliya [Sawirro]
Soomaliya 22.03.2018. 11:31